UCanzibe 14, 2018 admin
iziko New York Izicwangciso isixeko blockchain
Umemezele ngoMvulo ngexesha kwiveki blockchain eNew York, i New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) uqala amaphulo aliqela ukubeka isixeko kwimaphu njengentsika ubuchwepheshe blockchain. Eyona phakathi kwabo sisicwangciso ukuvula i “Blockchain Centre” eza kuphucula ulwazi kuluntu ubuchwepheshe kunye nokuququzelela incoko phakathi bachaphazelekayo kushishino.
I NYCEDC kwakhona isaziso ukhuphiswano, kulindeleke ukuba ethule emva 2018, ekujongwe ukuba ukujikelezisa izimvo zokuphucula iinkonzo zikamasipala anobuchwepheshe blockchain.
Samourai and goTenna sungula Bitcoin isipaji osebenza ngaphandle internet
Ekubeni kukho unxibelelwano intanethi azisoloko zifumaneka, uthembeke okanye yabucala, abasebenzisi cryptocurrency kufuneka ezinye iindlela ukudibanisa kwinethiwekhi. Ngoko ke sokuqalisa New York-based goTenna, yasungulwa ngo 2012 yi nabantwana Brazilian UDaniela and Jorge Perdomo, ibambisene ne Samourai Wallet ukuba asungule app Android olu hlobo evumela abasebenzisi ukuba uthumele iintlawulo bitcoin ngaphandle intanethi.
“Kufuneka ube nako ukuchitha bitcoin wakho kwiindawo yentlekele,” goTenna injineli uRichard Meyers uthe, bephawula bakubo Perdomo’ umsebenzi kutshanje e Puerto Rico, apho izixhobo goTenna wanceda abantu ukuxhulumana kwakhona emva kweNkanyamba Maria. “Njengoba nje wena unayo indlela kwamacala ifowuni yakho, uyakwazi ukuba phezulu kwaye ekubambisaneni nokuthetha.”
“It unikeza enye into yokuhlolwa-ukumelana,” Meyers uthe.
umqokeleli werhafu Florida lokuqala US awuthathi arhente ukwamkela Bitcoin
A Florida umqokeleli werhafu kwisiphaluka usebenzisana Bitcoin iintlawulo iprosesa BitPay ukwamkela cryptocurrency ukuze ngeenkonzo ezahlukeneyo.
Seminole County Tax Collector Joel Greenberg uthe kwingxelo NgoMvulo ukuba ofisi bakhe baya Bitcoin ukuba iintlawulo ezinxulumene ne-mvume lokuqhuba kunye namakhadi ID, tags imoto kunye namagama kunye irhafu.
Greenberg uthe kwingxelo:
“Injongo lwengqesho yam ofisi kukwenza amava ethu lwabathengi ngokukhawuleza, ngobuchule ngakumbi kakuhle, nokuba ukuzisa iinkonzo zikarhulumente ukususela ngenkulungwane ye-18 ukuya kwinkulungwane yama-21 yaye enye indlela nokongeza cryptocurrency kokukhethwa intlawulo yethu… ne-ofisi ye Seminole County Tax Collector kaThixo, besiye arhente wethu urhulumente kuqala ukwamkela Bitcoin… ngokwenza kube lula kunye ne-eriyeli kubo,” kuqhuba.
NASDAQ-enikwe cryptocurrency exchange ngokusesikweni ngoJuni
dx.exchange, Nokubekwa ukuze uqalise kwinyanga ezayo, na exchange crypto lokuqala esekelwe NASDAQ. "Abaxhamla kule ukubambisana ngokuphindwe kathathu: igama lebrendi, ubugcisa kunye nemigaqo,"Wathi CEO DX Exchange Daniel Skowronski.
Ngoxa inzuzo yokuqala kakhulu self-explanatory, Skowronski Wachaza ukuba kwezobugcisa wayeza bathembele lwezibonelelo NASDAQ ngayo, ezifana injini yayo ethelekisa - esetyenziswa yi phezu 70 yokutshintshiselana emhlabeni wonke.
SAP ukuze uqalise blockchain project unikezelo
Ngamazwe SAP software ngokuqinileyo ngoku wandisa umsebenzi wayo kunye blockchain kwi isithuba supply chain.
SAP ujonge ukusebenzisa zobugcisa kwiintambo ubonelelo kwezolimo ngendlela Farm yayo kwiindima Consumer.
Torsten acce, SAP eli blockchain wathi “Ithekhnoloji oluphuculweyo ivumela iinkampani ukuba ukulandelela imvelaphi lweemveliso zokutya, faka izicelo neminikelo, kwaye uqinisekise i nokwenza zoshishino.”
amalungelo awodwa omenzi wechiza Mastercard a ...
Post Previous:Crypto Abafikisayo